I-China LGS-2 yovavanyo lwe-CCD Spectrometer yokuvelisa kunye neFektri | Ezabasebenzi
I-LGS-2 yovavanyo lwe-CCD Spectrometer sisixhobo sokulinganisa injongo ngokubanzi. Isebenzisa i-CCD njengeyunithi yomamkeli ukwandisa kakhulu uluhlu lwayo lwesicelo, olukwaziyo ukufumana ixesha-lokwenene kunye nomboniso we-3-dimensional. Isixhobo esifanelekileyo sokufunda ngemithombo yokukhanya okanye ulungelelwaniso lwenkqubo yokubonisa.
Iqukethe i-monochromator yothango, iyunithi ye-CCD, inkqubo yokukhangela, i-amplifier ye-elektroniki, iyunithi ye-A / D kunye nePC. Esi sixhobo sidibanisa i-optics, oomatshini bokuchaneka, i-elektroniki, kunye nesayensi yekhompyuter. Into ebonakalayo yamkela imodeli ye-CT eboniswe ngezantsi.
Ukuqina kwemonochromator kulungile kwaye indlela elula izinzile kakhulu. Zombini isango lokungena nelokuphuma luthe nkqo ngobubanzi ngokuqhubekayo buhlengahlengiswa ukusuka kwi-0 ukuya kwi-2 mm. Umqadi udlula kwindawo yokungena S1(S1 Kwinqwelomoya ojolise kwisipili sedlala), emva koko kuboniswe sisipili M2. Ukukhanya okufana nokudubula kuthango lwetshiphu G. Mirror M3 yenza umfanekiso wokukhanya okuza kuvela kwiseyile kwi-S2 okanye S3 (isipili sokuphambukisa uM4 unokuqokelela isikhewu sokuphuma, S2 okanye S3). Isixhobo sisebenzisa indlela ye-sine ukufezekisa ukuskena kwamaza.
Indawo ekhethiweyo yesi sixhobo ziimeko eziqhelekileyo zaselebhu. Indawo kufuneka ihlambuluke kwaye ibe neqondo lokushisa elizinzileyo kunye nokufuma. Isixhobo kufuneka sibekwe kumgangatho othe tyaba (ukuxhasa ubuncinci i-100Kg) ngendawo ejikeleze umoya kunye nokudibana kombane okuyimfuneko.
Uluhlu lweWavelength Ngama-300 ~ 800 nm
Ubude boJoliso 302.5 mm
Ukuhambelana okungafaniyo D / F = 1/5
Wavelength Ukuchaneka ± 0.4 nm
Ukuphindaphinda kwamaza -0.2 nm
Ukukhanya okuKhanyayo ≤10-3
Umamkeli Iiseli ezingama-2048
Ixesha lokudityaniswa 1 ~ 88 zokumisa
Nothango lwaso lobhedu Imigca eyi-1200 / mm; Ubude obude obuqaqambileyo kwi-250 nm
Inqanaba elipheleleyo 400 mm × 295 mm × 250 mm
Ubunzima I-15 kg
Egqithileyo LGS-3 EZIIMODYULI EZIIMODYULI Multifunctional nothango Spectrometer / Monochromator
Okulandelayo: I-LGS-1 iLaser Raman Spectrometer
Izixhobo ze-LCP-18 zoMlinganiso weSantya sokuKhanya
LEAT-8 isivamvo lobushushu kunye semiconductor ref ...
Umlinganiso we-LCP-20 woBunzima bokuPhambuka -E ...
LMEC-10 Izixhobo yokulinganisa Surface Ulwelo T ...
Uluhlu lwe-LCP-17 Balmer yeHydrogen kunye neRydberg ...